48.4739°N 4.6389°W ﻿ / 48.4739; -4.6389 I Lanrivoaré dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29119. I Jean Simon no benny tanàna mandr ...
48.2867°N 4.4608°W ﻿ / 48.2867; -4.4608 I Lanvéoc dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29120. I Louis Ramoné no benny tanàna m ...
48.1383°N 3.8339°W ﻿ / 48.1383; -3.8339 I Laz, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29122. I Vital Louarn no benny t ...
48.2578°N 3.8892°W ﻿ / 48.2578; -3.8892 I Le Cloître-Pleyben dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29033. I Dominique Bilirit n ...
48.4808°N 3.7933°W ﻿ / 48.4808; -3.7933 I Le Cloître-Saint-Thégonnec dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29034. I Jean-René Péro ...
48.3586°N 4.7706°W ﻿ / 48.3586; -4.7706 I Le Conquet dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29040. I Xavier Jean no benny tanàna mand ...
48.5358°N 4.3697°W ﻿ / 48.5358; -4.3697 I Le Drennec dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29047. I Pierre Coz no benny tanàna mandr ...
48.2933°N 4.1775°W ﻿ / 48.2933; -4.1775 I Le Faou dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29053. I Pierre Engélibert no benny tan ...
48.5625°N 4.3342°W ﻿ / 48.5625; -4.3342 I Le Folgoet dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29055. I Bernard Tanguy no benny tanàna m ...
48.0669°N 4.2528°W ﻿ / 48.0669; -4.2528 I Le Juch dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29087. I Sébastien Stéphan no benny tanàna ...
48.5661°N 3.6372°W ﻿ / 48.5661; -3.6372 I Le Ponthou dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29219. I Jean-Paul Minec no benny tanàn ...
48.4092°N 4.3956°W ﻿ / 48.4092; -4.3956 I Le Relecq-Kerhuon dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29235. I Yohann Nédélec no benny t ...
48.3947°N 4.1297°W ﻿ / 48.3947; -4.1297 I Le Tréhou dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29294. I Monique Cann no benny tanàna mand ...
47.8953°N 3.6400°W ﻿ / 47.8953; -3.6400 I Le Trévoux dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29300. I André Fraval no benny tanàna m ...
48.1928°N 3.8972°W ﻿ / 48.1928; -3.8972 I Lennon, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29123. I Jean-Luc Vigouroux n ...
48.5722°N 4.3147°W ﻿ / 48.5722; -4.3147 I Lesneven dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29124. I Jean-Yves Le Goff no benny tanàna ...
48.1000°N 3.7831°W ﻿ / 48.1000; -3.7831 I Leuhan dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29125. I André Loussouarn no benny tanàn ...
48.5553°N 4.4031°W ﻿ / 48.5553; -4.4031 I Loc-Brévalaire dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29126. I Éric Rivaolen no benny tanàn ...
48.4744°N 4.0933°W ﻿ / 48.4744; -4.0933 I Loc-Eguiner dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29128. I Henri Billon no benny tanàna ma ...
48.4636°N 3.9683°W ﻿ / 48.4636; -3.9683 I Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29127. I Françoise Rao ...
48.3544°N 3.6936°W ﻿ / 48.3544; -3.6936 I Locmaria-Berrien dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29129. I Albert Le Guern no be ...
48.3758°N 4.6419°W ﻿ / 48.3758; -4.6419 I Locmaria-Plouzané dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29130. I Viviane Godebert no benny ...
48.4542°N 4.0639°W ﻿ / 48.4542; -4.0639 I Locmélar dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29131. I Roger Kerambloch no benny tanàna ...
48.6931°N 3.6436°W ﻿ / 48.6931; -3.6436 I Locquirec dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29133. I Gwénolé Guyomarch no benny tanà ...
48.6253°N 3.8594°W ﻿ / 48.6253; -3.8594 I Locquénolé dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29132. I Guy Pouliquen no benny tanàna ...
48.1000°N 4.2067°W ﻿ / 48.1000; -4.2067 I Locronan dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29134. I Jean-Luc Engelmann no benny t ...
47.8344°N 4.1681°W ﻿ / 47.8344; -4.1681 I Loctudy dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29135. I Joel Piété no benny tanà ...
47.9369°N 3.4772°W ﻿ / 47.9369; -3.4772 I Locunolé dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29136. I Jean-Yves Le Coz no benny tanàna ...
48.3217°N 4.2972°W ﻿ / 48.3217; -4.2972 I Logonna-Daoulas dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29137. I Françoise Péron no benny ta ...
48.3756°N 4.3039°W ﻿ / 48.3756; -4.3039 I Loperhet dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29140. I François Collec no benny tanàna ma ...
48.2781°N 4.0461°W ﻿ / 48.2781; -4.0461 I Lopérec dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29139. I Jean-Yves Crenn no benny tanàn ...
48.3222°N 3.8539°W ﻿ / 48.3222; -3.8539 I Loqueffret dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29141. I François Kergoat no benny t ...
48.1828°N 4.0261°W ﻿ / 48.1828; -4.0261 I Lothey dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29142. I Armand Louarn no benny tanàna m ...
48.0356°N 4.4350°W ﻿ / 48.0356; -4.4350 I Mahalon dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29143. I Bernard Le Gall no benny tanàna m ...
47.9067°N 3.8347°W ﻿ / 47.9067; -3.8347 I Melgven dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29146. I Michelle Le Breton-Helwig no benn ...
47.9047°N 3.5767°W ﻿ / 47.9047; -3.5767 I Mellac dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29147. I Bernard Pelleter no benny tanàna m ...
48.6192°N 4.0236°W ﻿ / 48.6192; -4.0236 I Mespaul dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29148. I Jacques Moal no benny tanàna mand ...
48.4683°N 4.5667°W ﻿ / 48.4683; -4.5667 I Milizac dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29149. I Fanch Guiavarch no benny tanàna man ...
48.5783°N 3.8267°W ﻿ / 48.5783; -3.8267 I Morlaix dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29151. I Agnès Le Brun no benny tanàna man ...
48.2028°N 3.5531°W ﻿ / 48.2028; -3.5531 I Motreff dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29152. I José Le Guélaff no benny tanàn ...
47.8150°N 3.6269°W ﻿ / 47.8150; -3.6269 I Moelan-sur-Mer dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29150. I Nicolas Morvan no benny ta ...
47.8203°N 3.7911°W ﻿ / 47.8203; -3.7911 I Névez dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29153. I Gérard Martin no benny tanàna mandr ...
48.4386°N 4.2336°W ﻿ / 48.4386; -4.2336 I Pencran dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29156. I Jean Crenn no benny tanàna mandritr ...
47.8127°N 4.3366°W ﻿ / 47.8127; -4.3366 I Penmarch dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29158. I Jacqueline Lazard no be ...
47.9394°N 4.3081°W ﻿ / 47.9394; -4.3081 I Peumerit dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29159. I Jean-Louis Caradec no benny tanà ...
48.5028°N 4.4247°W ﻿ / 48.5028; -4.4247 I Plabennec dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29160. I Jean-Luc Bleunven no benny tanàna ...
47.9067°N 4.0422°W ﻿ / 47.9067; -4.0422 I Pleuven dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29161. I Jean Loaec no benny tanàna mandri ...
48.2267°N 3.9681°W ﻿ / 48.2267; -3.9681 I Pleyben dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29162. I Annie Le Vaillant no benny tan ...
48.5056°N 3.8742°W ﻿ / 48.5056; -3.8742 I Pleyber-Christ dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29163. I Jean-Claude Kerdiles no be ...
47.8242°N 4.2286°W ﻿ / 47.8242; -4.2286 I Plobannalec-Lesconil dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29165. I Alain Lucas no benny ...